Zombieland: Double Tap (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 6.9/10 55347 votes
ဇာတျလမျးလေးတော့ အားလုံးရဲ့အကွိုကျ Zombieland : Double Tap(2019)ပါ။
Zombie land ဆိုတာနဲ့ ဇှနျဘီတှနေဲ့ သဘာဝကကြ အပီပွငျဆုံးရိုကျကူးထားတဲ့
ကမ်ဘာကွီးကို ဇှနျဘီတှအေုပျစိုးကာ လူသားတှခေကျခကျခဲခဲအသကျရှငျနရေခြိနျပါ။
ကိုလံဘတျဈရယျ တယျလာဟတျဆီရယျ ဝီခြီတာ ညီအမရယျ
ပေါငျးစညျးသှားတာ 2009 movie မှာကတညျးကအားလုံးသိပွီးသားဖွဈမှာပါ။။
အခု 2019ထှကျကားထဲ မှာတော့
ကိုလံဘတျဈရယျ တယျလျလာဟတျဆီရယျ ဝီခြီတာရယျ လဈတဲရော့ရယျ တို့ဟာ
ခဈြသူရညျးစားရှာကာ စှနျ့စားခနျးတှဖှေငျ့ဖို့ ကွိုးစားနသေူတဈဦးပါ။
တဈဖကျမှာတော့ ဇှနျဘီတှကေလဲ တိုးတကျပွောငျးလဲကာ အဆငျ့တှမွေငျ့လာပါပွီ။
တဈနမှေ့ာတော့ လဈတဲရော့ချ တဈယောကျ ထှကျသှားပါတော့တယျ။
ထှကျသှားတာကလဲ ငွိမျးခမျြးရေးလိုလားသူ ဂီတသမား ဟဈပီတဈယောကျနဲ့ပါ။
ဇှနျဘီတှေ အဆငျ့မွငျ့လာလို့ အန်တရာယျတှအေရမျးမြားနတေဲ့အခြိနျမှာ
ထှကျသှားတဲ့ လဈတဲရော့ချနောကျကို လိုကျလံရှာဖှရေပါတော့တယျ။
အဆငျ့မွငျ့ပွီး သတျရခကျခဲတဲ့ ဇှနျဘီတှနေဲ့ ဘယျလိုရငျဆိုငျရမလဲ?
လမျးမှာရော ဘာတှတှေကွေုံ့ရမလဲ?Zombieland ရဲ့
ထုံးစံအတိုငျး ဟာသနှောကာ စှနျ့စားခနျးတှကေိုကွညျ့ရှုရမှာပါ။
Rating တှအေနနေဲ့ကလဲ Imdb Rating 7.1တောငျရရှိထားတာမို့
ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Kyamtrapvibe ဖွဈပါတယျ
ဇာတ်လမ်းလေးတော့ အားလုံးရဲ့အကြိုက် Zombieland : Double Tap(2019)ပါ။
Zombie land ဆိုတာနဲ့ ဇွန်ဘီတွေနဲ့ သဘာဝကျကျ အပီပြင်ဆုံးရိုက်ကူးထားတဲ့
ကမ္ဘာကြီးကို ဇွန်ဘီတွေအုပ်စိုးကာ လူသားတွေခက်ခက်ခဲခဲအသက်ရှင်နေရချိန်ပါ။
ကိုလံဘတ်စ်ရယ် တယ်လာဟတ်ဆီရယ် ဝီချီတာ ညီအမရယ်
ပေါင်းစည်းသွားတာ 2009 movie မှာကတည်းကအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။။
အခု 2019ထွက်ကားထဲ မှာတော့
ကိုလံဘတ်စ်ရယ် တယ်လ်လာဟတ်ဆီရယ် ဝီချီတာရယ် လစ်တဲရော့ရယ် တို့ဟာ
ချစ်သူရည်းစားရှာကာ စွန့်စားခန်းတွေဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ဦးပါ။
တစ်ဖက်မှာတော့ ဇွန်ဘီတွေကလဲ တိုးတက်ပြောင်းလဲကာ အဆင့်တွေမြင့်လာပါပြီ။
တစ်နေ့မှာတော့ လစ်တဲရော့ခ် တစ်ယောက် ထွက်သွားပါတော့တယ်။
ထွက်သွားတာကလဲ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူ ဂီတသမား ဟစ်ပီတစ်ယောက်နဲ့ပါ။
ဇွန်ဘီတွေ အဆင့်မြင့်လာလို့ အန္တရာယ်တွေအရမ်းများနေတဲ့အချိန်မှာ
ထွက်သွားတဲ့ လစ်တဲရော့ခ်နောက်ကို လိုက်လံရှာဖွေရပါတော့တယ်။
အဆင့်မြင့်ပြီး သတ်ရခက်ခဲတဲ့ ဇွန်ဘီတွေနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ?
လမ်းမှာရော ဘာတွေတွေ့ကြုံရမလဲ?Zombieland ရဲ့
ထုံးစံအတိုင်း ဟာသနှောကာ စွန့်စားခန်းတွေကိုကြည့်ရှုရမှာပါ။
Rating တွေအနေနဲ့ကလဲ Imdb Rating 7.1တောင်ရရှိထားတာမို့
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Kyamtrapvibe ဖြစ်ပါတယ်
Option 1 storage.msubmovie.com 468 MB SD (480p)
Option2megaup.net 468 MB SD (480p)
Option3datbu.com 468 MB SD (480p)
Option4uptomega.com 468 MB SD (480p)
Option5sharer.pw 468 MB SD (480p)
Option6yuudrive.me 468 MB SD (480p)
Option9datbu.com 1.1 GB HD
Option 10 uptomega.com 1.1 GB HD
Option 11 sharer.pw 1.1 GB HD
Option 12 yuudrive.me 1.1 GB HD
Option 13 storage.msubmovie.com 3.3 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 14 megaup.net 3.3 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 15 sharer.pw 3.3 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 16 yuudrive.me 3.3 GB FHD DTS-HDMA 5.1